Acha anụnụ anụnụ, nwa, ọbara ọbara, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ aja aja; egbugbere ọnụ akara ma ọ bụ nkuanya akara ink
Akara ọmụmụ: Ota nevus, Ito nevus, black nevus, wdg.
Ink: anwụ na-ere ọkụ tụrụ, afọ tụrụ, speckles, freckles, agadi flecks, wdg
Epidermal ink: dị ka freckle, agadi flecks, kọfị ntụpọ….
Vaskụl lentigines: vaskụla ọnya, ududo arịa, ududo veins
Akpụkpọ anụ ahụ, peeling carbon
Ahịhịa Epidermal: dị ka freckle, agadi flecks, kọfị ntụpọ ....
Vaskụl lentigines: ọnya vascular, ududo ududo, ududo
Dịka ụkpụrụ nke fotopyrolysis na-ahọrọ, mgbe ọ na-eme ka oge ọrụ nke laser dị mkpụmkpụ, ike laser na-ekesa obere anụ ahụ. Ọ bụrụ na ike dị na lekwasịrị anya nke chọrọ ọgwụgwọ, enwere ike ichebe anụ ahụ gbara ya gburugburu, ya mere nhọrọ nke ọgwụgwọ na-esikwu ike.
The picosecond laser usu obosara bụ naanị 1% nke omenala Q-gbanwere laser. N'okpuru a obere-mkpụmkpụ usu obosara, ìhè ike bụ akaha na-ghọrọ n'ime okpomọkụ ike, na e nwere fọrọ nke nta ka ọ bụla photothermal effect.When laser ike na-etinye obi gị dum site lekwasịrị, ya olu ga-amụba ngwa ngwa, na mgbe ahụ a ga-gbawara na dọwa iberibe.
"The picosecond laser bụ ihe dị ike ma zuru ezu na ndinuak pigmenti ahụ na-erughị emebi emebi gburugburu anụ ahụ." Site na nlekọta ọgwụgwọ, ọnụego dị irè nwere ike iru karịa 94% (Ota nevus fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100%).
7 jikọtara usoro nnyefe aka, mee ka ọ dị mfe maka ọgwụgwọ ogologo oge.
♦ Abụọ size (2-10nm) nwere ike gbanwee site forcus ajdustment oghere.
A-♦ Otu na okpukpu abụọ nwere ike ịgbanwe site na ihuenyo ahụ, mgbanwe ntụgharị ihu bụ 1064 / 532nm.
♦ Red diode laser doo point, chọta ebe ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị.
A-♦ Ike dị elu nke etinyere n'ime mmiri jụrụ oyi nwere ike iji igwe rụọ ọrụ mgbe niile.
Isi laser: Q-Gbanwee ND: YAG laser siri ike
Ogologo ogologo: 1064nm, 532nm
Mmepụta Energy: Single usu: 1064nm: 100-800mj; 532nm: 100-400mj
Ike ume (max.): Ugboro abụọ: 1064nm: 100-1600mj; 532nm: 100-800mj
Pulse oge: 750ps
Ugboro ugboro: 1-10hz mgbanwe
Abù Abụọ: 2-10mm mgbanwe
Ìhè ndu ndu: 650nm acha uhie uhie
Jụrụ System: Emechiela Cycle Water ka Air Okpomọkụ Exchanger
Laser nnyefe: Korea 7 jikọrọ aka na nkwonkwo aka
Rollingchịkwa usoro: 10.4inch TFT agba ihuenyo mmetụ
Ike chọrọ: 220V, 10A, 50 / 60Hz; 110v, 10a, 50 / 60Hz
Igwe akụkụ: 680mm × 400mm × 820mm
Nha ịbụ: 75kg
Mara: Nka na ụzụ data gbanwere agaghị agwa n'ụzọ pụrụ iche
Kpọtụrụ: Ruby Mu
(WhatsApp / webụ)
Nke gara aga: Sano cryolipolysis slimming igwe The Best Cryolipolyse Machine / Cryolipolysis Slimming igwe
Osote: ngwa ngwa abụba kefriza cryolipolysis Slimming igwe na 4 cryolipolysis ịlesụ
Laser Yag Pico Nke abụọ
Nd Yag Picosecond Laser Tattoopu Mwepụ
Pico Tattoo Laser mwepụ Machine
Q-Switched Tattoo mwepụ Laser
Igwe mwepụ egbugbu
otutu mwepụ mwepụ, Ọrịa Co2 Laser, Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Co2 Fractional Laser Machine, Ems Akwara mkpali Machine, Shr Ipl Opt,